RW Cumar oo BankiMoon kul Shiray New York – Radio Daljir
Oktoobar 2, 2015 5:55 b 0
Jimco, Octobar 02, 2015 (Daljir) —Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke oo ka qeyb galaya shirka kala fadhiga Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xafiiskiisa ku booqday xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Banki-moon, waxaana ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmarke, ayaa soo hadal qaaday dhismaha maamul goboleedyada dalka iyo waliba hormarka laga sameeyay,inkastoo uu sheegay in wali ay harsan tahay dhismaha maamulkal Gobolada Hiraan iyo Shabeellaha dhexe.
Dhanka kalena ra’iisul wasaare Cumar wuxuu xusay in shirkii dhammaadkii bishii 9aad kadhacay magaalada Muqdisho ay kasoo baxday natiijo wanaagsan, wadankana ay u noqon doonto tallaabo wanaagsan oo horay looqaaday, wuxuuna sheegay in dowladda ay waajib ku tahay dhowrista qaanuunka iyo Hay’adah dowliga ah.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay Banki Moon in Bulshada iyo dadka Talada ay ka go’do lagala tashanayo sida ay noqon karto doorashada la filayo iney dalka ka dhacdo sanadka 2016-ka,inkastoo Dowlada horay u shaacisay inaanay qof iyo cod doorasho dalka ka dhici Karin.
Ugu dambayntiina labada mas’uul ayaa isku raacay sida loogu baahan yahay xoojinta Mandate-ka Qaramada Midoobay ee Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya kuwaasi oo guulo la taaban karo ka gaarayo dagaalka Al-shabaab,sida Labada mas’uul ay sheegeen.
Fanaanad Soomaliyeed oo Muqdisho ku Geeriyoortay